किन उठ्छ मानिसलाई रिस ? कसरी राख्ने रिसमाथि नियन्त्रण ? पढ्नुहोस्::Nepal's Digital Paper
किन उठ्छ मानिसलाई रिस ? कसरी राख्ने रिसमाथि नियन्त्रण ? पढ्नुहोस्
कहिलेकाहिँ रिस उठ्नु सामान्य हो । भलै, रिसले फाइदाभन्दा हानि नै ज्यादा गर्छ । खासमा रिस उठ्छचाहिँ किन त ?वैज्ञानिकहरुको भनाइमा रिस हाम्रो भावनालाई व्यक्त गर्ने एक माध्यम हो । जतिबेला हामी कुनै समस्यामा पर्छौं या मनमा कुनै डर पस्छ, कुनै चिज गुमाउने डर हुन्छ तर त्यसको सामना गर्ने कुनै उपाय वा आँट हुँदैन, त्यतिबेला हामीलाई रिस उठ्छ ।
आश्चर्यजनक: हरेक वर्ष ७० हजार सर्प भेला ठाउँ कहाँ हो त ?
४९ वर्षकी अविवाहित एलिजाबेथको ब्वायफ्रेण्डसँगबाट एउटा छोरा, कोहीपनि चित्त नबुझेपछि कुकुरसँग बिहे !
तपाईलाई थाहा छ, पाद्नुका पनि यति धेरै फाइदा छन् नि …